Diflunisal - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Diflunisal
Diflunisal ကို မည်သည့်အကြောင်းအရာများအတွက် အသုံးပြုကြပါသလဲ။
အကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်ပေါ်ခံစားရတတ်တဲ့ နာကျင်မှုဝေဒနာတွေကို သက်သာစေဖို့အတွက် Diflunisal ကို အများဆုံး အသုံးပြုလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီဆေးဟာ အဆစ်အမြစ်ရောင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ နာကျင်ရောင်ရမ်းခြင်းနဲ့ အဆစ်အမြစ်တောင့်တင်းခြင်းတို့ကိုလည်း သက်သာလျော့နည်းစေပါတယ်။ ဒီလိုနာကျင်မှုလက္ခဏာတွေကို သက်သာသွားစေခြင်းအားဖြင့် နေ့စဉ်လှုပ်ရှားသွားလာမှုတွေကို ပိုမိုအဆင်ပြေပြေလုပ်ကိုင်လာနိုင်စေမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆေးကို စတီးရွိုက်မဟုတ်သော အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများ (NSAID)လို့လည်း ခေါ်ပါတယ်။
Diflunisal ကို ဘယ်လိုသောက်သုံးသင့်ပါသလဲ။
သင့်ဆရာဝန်မှ အထူးတလည် ညွှန်ကြားထားတဲ့ အခြေအနေမှတပါး ဒီဆေးကို ရေဖန်ခွက်တခွက်အပြည့် (၈အောင်စ သို့မဟုတ် ၂၄၀ စီစီ)နဲ့ သောက်ပါ။ ဆေးသောက်ပြီးဆယ်မိနစ်အတွင်း လဲလျောင်းခြင်း မပြုရပါဘူး။ ဗိုက်အောင့်ခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက် အစာ/နို့တို့နဲ့ ရောသောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အစာစားပြီးပြီးချင်း သောက်ခြင်းတို့ကို ပြုလုပ်သင့်ပါတယ်။
ဆေးတလုံးလုံးကို မြိုချပါ။ ဆေးကို ချိုးခြင်း၊ခြေခြင်း၊ဝါးစားခြင်းတို့ မလုပ်ပါနဲ့။ ဒီလိုလုပ်ရင် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ပိုလာစေနိုင်ပါတယ်။ သုံးစွဲရမယ့် ဆေးပမာဏကတော့ သင့်ရောဂါအခြေအနေနဲ့ ဆေးကိုတုံ့ပြန်မှုတို့အပေါ် မူတည်နေပါတယ်။ တနေ့ကို ၁၅၀၀ မီလီဂရမ်ထက် ပိုမသောက်ပါနဲ့။(အစာအိမ်သွေးယိုစီးခြင်း ကဲ့သို့သော) ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့အတွက် ဒီဆေးကို တတ်နိုင်သမျှ ပမာဏအနည်းဆုံးသာ သုံးစွဲရမှာဖြစ်သလို သုံးစွဲတဲ့ အချိန်ကာလအတိုင်းအတာကိုလည်း တိုနိုင်သမျှတိုစေရပါမယ်။ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတဲ့ ဆေးပမာဏထက် တိုးသောက်ခြင်း သို့မဟုတ် အကြိမ်ရေတိုးသောက်ခြင်းတွေကို ရှောင်ရှားရပါမယ်။ အဆစ်အမြစ်ရောင်ခြင်းဝေဒနာဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေမယ်ဆိုရင်တော့ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း ဆက်လက်သောက်သုံးနိုင်ပါတယ်။ ဒီဆေးရဲ့ ကောင်းကျိုး၊ဆိုးပြစ်တွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး သင့်ဆရာဝန်နဲ့ ဆွေးနွေးပါ။
အချို့သော ရောဂါအခြေအနေတွေ (ဥပမာ အဆစ်အမြစ်ရောင်ခြင်း)မှာဆိုရင် ဆေးရဲ့ အာနိသင်အပြည့်အဝပြဖို့အတွက် ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်အတိုင်း၂ပတ်တိတိ ပုံမှန်သောက်သုံးဖို့ လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ သင့်အနေနဲ့ ဒီဆေးကို ပုံမှန်သုံးစွဲတာမျိုးမဟုတ်ဘဲ လိုအပ်မှ သုံးတဲ့ ပုံစံမျိုးနဲ့ သုံးစွဲတယ်ဆိုရင် နာကျင်ခြင်းဝေဒနာစတင်ပေါ်ပေါက်လာပြီဆိုတာနဲ့ သုံးစွဲမှသာလျှင် ဆေးအာနိသင်ကောင်းစွာပြမယ်ဆိုတာကို သိထားသင့်ပါတယ်။ တကယ်လို့ အရမ်းနာလာတဲ့အထိ ပေကပ်နေပြီးမှ သောက်မယ်ဆိုရင်တော့ ဆေးအာနိသင်ကို ပြည့်ပြည့်ဝဝရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်ရောဂါအခြေအနေပိုဆိုးလာရင် ဆရာဝန်ကို အသိပေးပါ။
Diflunisal ကို တိုက်ရိုက်နေရောင်ခြည်မထိုးအောင်နဲ့ စိုစွတ်မှုမရှိအောင်ထားတာက အကောင်းဆုံးသိုလှောင်သိမ်းဆည်းတဲ့နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်တာနဲ့ ဆေးအနေအထားပျက်ယွင်းမှုတွေမဖြစ်အောင်လို့ Diflunisal ကို ရေချိုးခန်းထဲမှာသိမ်းဆည်းတာနဲ့ ရေခဲအောင် သိမ်းဆည်းတာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။ medication ဆေးအမျိုးအစားနဲ့၊ ဆေးထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္ပဏီကွဲပြားမှုပေါ်မူတည်ပြီး သိမ်းဆည်းတဲ့ပုံစံကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဆေးဘူးအခွံမှာပါတဲ့ သိုလှောင်သိမ်းဆည်းမှုညွှန်ကြားချက်ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးတာမျိုး ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို မေးမြန်းတာမျိုးကိုအမြဲလုပ်ပါ။ လုံခြုံစိတ်ချရဖို့အတွက် ဆေးဝါးတွေအကုန်လုံးကို ကလေးတွေ၊ အိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်တွေနဲ့ ဝေးရာမှာထားပါ။)
Diflunisal ကို အိမ်သာထဲကိုပစ်ချတာနဲ့ ရေထွက်ပေါက်တွေထဲကနေ ဆေးချတာမျိုးကို မလုပ်သင့်ပါဘူး။ ဆေးဝါးတွေကိုမလိုအပ်တော့တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် သက်တမ်းကုန်ဆုံးသွားတဲ့အခါတွေမှာ စနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ ဆေးဝါးများကို စနစ်တကျဘယ်လိုစွန့်ပစ်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်လို့ သင့်ရဲ့ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နဲ့တိုင်ပင်ပါ။
Diflunisal ကိုရေခဲသေတ္တာထဲတွင် သိမ်းဆည်းခြင်းက အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဆေးအာနိသင်ပျက်ပြယ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေခဲအောင်မလုပ်ရပါ။
Diflunisal ကိုမသောက်သုံးခင်မှာ ဘယ်အချက်အလက်တွေကို သိထားသင့်သလဲ။
Diflunisal နဲ့ ဓါတ်မတည့်ခြင်း၊အက်စ်ပရင် သို့မဟုတ် အခြားသော salicylates များနဲ့ ဓါတ်မတည့်ခြင်း (ဥပမာ choline salicylate)၊အခြားသော စတီးရွိုက်မဟုတ်တဲ့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများနဲ့ ဓါတ်မတည့်ခြင်း (ဥပမာ ibuprofen, naproxen, celecoxib) သို့မဟုတ် ဓါတ်မတည့်ခြင်းတမျိုးမျိုး ရှိနေပါက ဆရာဝန်ကို ကြိုတင်အသိပေးပါ။ ဒီဆေးမှာ ပါဝင်တဲ့ အချို့သောဓါတ်ပစ္စည်းတွေဟာ ဓါတ်မတည့်ခြင်း သို့မဟုတ် အခြားပြဿနာတွေကို ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ထပ်မံသိရှိနိုင်ဖို့အတွက် သင့်ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းပါ။
အထူးသဖြင့် အောက်ပါရောဂါများရှိပါက သင့်ဆရာဝန်ကို ကြိုတင် အသိပေးပါ။
-ပန်းနာရင်ကြပ်ရောဂါ (အထူးသဖြင့် အက်စ်ပရင် သို့မဟုတ် အခြားသော စတီးရွိုက်မဟုတ်တဲ့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေ သုံးစွဲအပြီးမှာ အသက်ရှုရခက်ခဲလာတာမျိုး ကြုံတွေ့ဖူးခြင်း)၊အသည်းရောဂါ၊(ကောင်းစွာထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်း မရှိသော) ဆီးချိုရောဂါ၊အစာအိမ်/အူ/အစာရေမြို ပြဿနာများရှိခြင်း (ဥပမာ သွေးယိုစီးခြင်း၊အနာဖြစ်နေခြင်း)၊နှလုံးရောဂါ (ဥပမာ ရုတ်တရက် နှလုံးဖောက်ဖူးခြင်း)၊လေဖြတ်ခြင်း၊သွေးတိုးခြင်း၊ဖောရောင်ခြင်း (အရည်များစုပုံလာပြီး ဖောရောင်ဖောင်းကားခြင်း)၊သွေးရောဂါများရှိခြင်း (ဥပမာ သွေးအားနည်းရောဂါ)၊သွေးကျဲ/သွေးခဲခြင်း ပြဿနာများ၊နှာခေါင်းထဲမှာ polyps လို့ခေါ်တဲ့ အလုံးလေးများ ရှိနေခြင်း စတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
Diflunisal အပါအဝင် စတီးရွိုက်မဟုတ်တဲ့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေဟာ တခါတရံမှာ ကျောက်ကပ်ပြဿနာတွေကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ သင့်ခန္ဓါကိုယ်အတွင်း ရေဓါတ်နည်းပါးနေခြင်း၊နှလုံးမကောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ကျောက်ကပ်ရောဂါအခံရှိခြင်း၊အသက်အရွယ်အိုမင်းခြင်း သို့မဟုတ် အချို့သောဆေးဝါးများကို သုံးစွဲနေခြင်း စတဲ့ အချက်တွေနဲ့ တိုက်ဆိုင်နေမယ်ဆိုရင် ကျောက်ကပ်ပြဿနာတွေကို ပိုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရေဓါတ်နည်းပါးခြင်းကို ကာကွယ်နိုင်စေဖို့ သင့်ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်း ရေများများသောက်ခြင်း၊ဆီးပမာဏပြောင်းလဲတယ်ဆိုတာနဲ့ ဆရာဝန်ကို အမြန်ဆုံးအသိပေးခြင်း စတာတွေကို လုပ်ဆောင်ရပါမယ်။
ခွဲစိတ်မှုတခုခု ခံယူရတော့မယ်ဆိုရင်လည်း သင့်အနေနဲ့ ဒီဆေးသုံးစွဲနေကြောင်း ခွဲစိတ်ဆရာဝန် သို့မဟုတ် သွားဆရာဝန်ကို အသိပေးပါ။
ဒီဆေးဟာ သင့်ကို မူးဝေစေ၊အိပ်ငိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ အရက် ဒါမှမဟုတ် ဆေးခြောက်သုံးထားရင် ပိုလိုတောင် ထိုင်းမှိုင်းစေပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ကားမောင်းခြင်း၊စက်ကိရိယာတွေကို ထိန်းချုပ်မောင်းနှင်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် တက်ကြွနိုးကြားနေဖို့လိုအပ်တဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကို လုပ်ဆောင်တော့မယ်ဆိုရင် အဆိုပါ လှုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုတွေကို အန္တရာယ်ကင်းစွာ လုပ်နိုင်ပြီလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သေချာတော့မှ လုပ်ဆောင်ရပါမယ်။ သင်ဟာ ဆေးခြောက်အသုံးပြုသူတဦးဆိုရင် ဆရာဝန်ကို ကြိုတင်အသိပေးပါ။
ဒီဆေးဟာ အစာအိမ်သွေးယိုစီးခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ အရက် ဒါမှမဟုတ် ဆေးလိပ်/ဆေးရွက်ကြီး နေ့စဉ်သုံးစွဲခြင်းဟာလည်း အစာအိမ်သွေးယိုစီးခြင်းကို ဖြစ်စေနိုင်တာမို့ ဆေးနဲ့ အရက်/ဆေးလိပ်နှစ်မျိုးပေါင်းလိုက်ရင်တော့ ဆိုဖွယ်ရာတောင် မရှိပါဘူး။ အရက်ကို လျှော့သောက်ပြီး ဆေးလိပ်ကို လုံးဝဖြတ်သင့်ပါတယ်။ ထပ်မံသိရှိနိုင်ဖို့အတွက် သင့်ဆရာဝန်နဲ့ ဆက်သွယ်ဆွေးနွေးပါ။
သက်ကြီးရွယ်အိုတွေ (အထူးသဖြင့် အစာအိမ်/အူလမ်းကြောင်း သွေးယိုစီးတဲ့ ပြဿနာရှိသူတွေ၊ကျောက်ကပ်ပြဿနာရှိသူတွေ)ဟာ ဒီဆေးရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို ပိုမိုခံစားရနိုင်ပါတယ်။
There are no adequate studies in women for determining risk when using this Diflunisalduring pregnancy or while breastfeeding. Please always consult with your doctor to weigh the potential benefits and risks before taking this Diflunisal. This Diflunisalis pregnancy risk category Caccording to the US Food and Drug Administration (FDA).
Diflunisal က ဘယ်လိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေရှိနိုင်လဲ။
ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ရင်ပူခြင်း၊ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ထိုင်းမှိုင်းငိုက်မျဉ်းခြင်းတွေ ဖြစ်ပေါ်နိုင်ပါတယ်။ တကယ်လို့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ကာလကြာရှည်ဖြစ်ပေါ်နေမယ် သို့မဟုတ် ပိုဆိုးလာမယ်ဆိုရင် သင့်ဆရာဝန်ကို အမြန်ဆုံး အကြောင်းကြားပါ။ ဆေးကပေးနိုင်တဲ့ အာနိသင်ကောင်းကျိုးတွေဟာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေထက် ပိုမိုများပြားသာလွန်တယ်လို့ သင့်ဆရာဝန်က ယူဆလို့သာ ဒီဆေးကို သုံးစွဲဖို့ ညွှန်ကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆေးကိုသုံးစွဲသူအများစုမှာတော့ ဆိုးရွားပြင်းထန်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်ပေါ်လေ့မရှိပါဘူး။ အောက်ဖော်ပြပါ ဆိုးရွားပြင်းထန်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေပေါ်ပေါက်လာရင် ဆရာဝန်ထံ အမြန်အကြောင်းကြားရပါမယ်။
-ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ခြေလက်များဖောရောင်ခြင်း၊ရုတ်တရက်/မမျှော်လင့်ဘဲ ကိုယ်အလေးချိန်တက်လာခြင်း၊အမြင်အာရုံများပြောင်းလဲလာခြင်း၊အကြားအာရုံများပြောင်းလဲလာခြင်း (ဥပမာ : နားထဲတစီစီမြည်နေခြင်း)၊စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများ ရှိလာခြင်း (ဥပမာ စိတ်ရှုပ်ထွေးခြင်း၊ကယောင်ကတမ်းဖြစ်ခြင်း)၊နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း၊ပြင်းထန်စွာ ခေါင်းကိုက်ခြင်း၊တောက်လျှောက်ခေါင်းကိုက်နေခြင်း၊သတိလစ်ခြင်း၊အစာရေစာတို့ကို မြိုချရခက်ခဲခြင်း၊မြိုချလျှင် နာကျင်ခြင်း စတဲ့ လက္ခဏာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ရှားပါးပေမယ့် အလွန်ဆိုးရွားပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလက္ခဏာတွေပေါ်ပေါက်လာရင် ဆရာဝန်နဲ့ အမြန်ဆုံးပြသရပါမယ် : ဥပမာ ကျောက်ကပ်ပြဿနာရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြတဲ့ လက္ခဏာများ (ဆီးပမာဏပြောင်းလဲခြင်း စသည်)၊အလွယ်တကူ သွေးခြေဥခြင်း/သွေးထွက်ခြင်း၊ကူးစက်ပိုးဝင်ခြင်းရဲ့ လက္ခဏာများ (အဖျားတက်ခြင်း၊ကာလကြာရှည်လည်ချောင်းနာနေခြင်း စသည်)၊အကြောင်းရင်းထူးထူးခြားခြား မရှိဘဲ ဇက်တောင့်နေခြင်း စတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဆေးဟာ ရှားရှားပါးပါးဆိုသလို အသည်းကိုလည်း ထိခိုက်စေနိုင်ပြီး အသက်အန္တရာယ်တောင် ရှိပါတယ်။ အောက်ဖော်ပြပါ ဆိုးရွားပြင်းထန်တဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ဖြစ်ပေါ်ခံစားလာရရင် diflunisal သောက်ခြင်းကို ရပ်တန့်ပြီး ဆရာဝန်ကို ချက်ချင်းအသိပေးပါ။
-မျက်လုံး/အရေပြားတို့ ဝါလာခြင်း၊ဆီးအရောင်မည်းခြင်း၊ထူးထူးခြားခြား/အလွန်အမင်း ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း၊ပြင်းထန်စွာ ဗိုက်အောင့်ခြင်း၊ကာလကြာရှည် ပျို့အန်မအီမသာဖြစ်ခြင်း။
အလွန်ပြင်းထန်တဲ့ ဓါတ်မတည့်ပြဿနာမျိုးတွေ ဖြစ်ခဲတယ်ဆိုပေမယ့် ဖြစ်လာခဲ့ရင်လည်း အရေးပေါ်ဆေးဝါးကုသမှုကို အမြန်ဆုံး ခံယူရပါမယ်။ အဆိုပါ ဓါတ်မတည့်လက္ခဏာတွေကတော့ အနီစက်များထွက်ခြင်း၊ဖောရောင်ယားယံခြင်း (အထူးသဖြင့် မျက်နှာ/လျှာ/လည်ချောင်းစသည်)၊ပြင်းထန်စွာ ထိုင်းမှိုင်းငိုက်မျဉ်းခြင်း၊အသက်ရှုရခက်ခြင်း စတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ယခုဖော်ပြပါ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများကို ခံစားရမှုမှာ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားမှုရှိနိုင်ပါတယ်။ အထက်ဖော်ပြပါဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများတွင် မပါဝင်သည့် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများလည်းရှိနိုင်ပါတယ်။ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးနှင့်ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများရှိပါက သင်၏ဆရာဝန် သို့မဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများပြုလုပ်ပါ။
ဘယ်ဆေးဝါးတွေက diflunisal နဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်သလဲ။
ဒီဆေးနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်တဲ့ ဆေးဝါးတွေကတော့ aliskiren, ACE inhibitors (ဥပမာ captopril, lisinopril), angiotensin II receptor blockers (ဥပမာ losartan, valsartan), antacids (ပုံမှန်သုံးစွဲခြင်း), cidofovir, corticosteroids (ဥပမာ prednisone), digoxin, ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးအရှင်ပါဝင်တဲ့ တုပ်ကွေးကာကွယ်ဆေး, lithium, methotrexate, pemetrexed, probenecid, ဆီးဆေးများ (ဥပမာ furosemide, hydrochlorothiazide, triamterene) စတာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သွေးယိုစီးခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ အခြားဆေးများနဲ့ ဒီဆေးကို တွဲဖက်သုံးစွဲမယ်ဆိုရင် သွေးထွက်လွန်ခြင်းဖြစ်ပေါ်ဖို့ အန္တရာယ်ပိုများပါတယ်။ဥပမာ သွေးမွှားဥဆန့်ကျင်ဆေးများ (clopidogrel စသည်)၊ သွေးကျဲဆေးများ (dabigatran/enoxaparin/warfarin စသည်)။
အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး နဲ့ အဖျားကျဆေးအများအပြား (ဥပမာ စတီးရွိုက်မဟုတ်သော အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးများ – aspirin, ibuprofen, indomethacin, ketorolac သို့မဟုတ် naproxen စသည်)ဟာ diflunisal နဲ့ အတူတကွ သုံးစွဲမယ်ဆိုရင် diflunisal ရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေကို ပိုဆိုးရွားစေနိုင်တာမို့ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားတဲ့ ဆေးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ဆရာဝန်လက်မှတ်မလိုဘဲ ဆေးဆိုင်တွေမှာ အလွယ်တကူဝယ်ယူနိုင်တဲ့ ဆေးပဲဖြစ်ဖြစ် ပါဝင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ ဆေးညွှန်းကို သေချာစွာဖတ်ရှုသင့်ပါတယ်။ အထူးတလည်လိုအပ်တဲ့အခြေအနေတွေအတွက် (ဥပမာ နှလုံးရောဂါအတွက်၊လေဖြတ်ခြင်းကို ကာကွယ်ဖို့အတွက်) အက်စ်ပရင် ပမာဏအနည်းငယ် (အများအားဖြင့် တနေ့လျင် ၈၁ – ၃၂၅ မီလီဂရမ်)ကို သုံးစွဲဖို့ ဆရာဝန်က ညွှန်ကြားထားတယ်ဆိုရင်တော့ ဆက်လက်သုံးစွဲသင့်ပါတယ်။ အသေးစိတ်ထပ်မံသိရှိနိုင်ဖို့အတွက် သင့်ဆရာဝန်ကို မေးမြန်းပါ။
ဒီဆေးဟာ အချို့သော ဓါတ်ခွဲစစ်ဆေးမှုအဖြေတွေကို အလွဲလွဲအချော်ချော်ဖြစ်အောင် နှောင့်ယှက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင့်အနေနဲ့ diflunisal သုံးစွဲနေကြောင်း ဓါတ်ခွဲခန်းတာဝန်ခံနဲ့ ဆရာဝန်တွေကို အသိပေးထားပါ။Diflunisal ဟာ သင်အခုလောလောဆယ်သောက်သုံးနေတဲ့တခြားသော ဆေးဝါးတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်နိုင်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဆေးဝါးဓါတ်ပြုမှုတွေ မဖြစ်လာအောင်လို့ သင်လက်ရှိသောက်သုံးနေတဲ့ ဆေးဝါးတွေအားလုံးရဲ့စာရင်းကို လုပ်ထားပြီး (စာရင်းလုပ်တဲ့အခါမှာ ဆရာဝန်ညွှန်ကြားထားတာတွေ၊ မညွှန်ကြားဘဲ သောက်သုံးနေတာတွေ၊ သဘာဝဆေးဘက်ဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးပါဝင်ပါတယ်) ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်သူကို အမြဲပြောပြပါ။ ဆေးဝါးတွေကို ဆရာဝန်ခွင့်ပြုချက်မပါဘဲ သောက်သုံးခြင်း၊ ရပ်ဆိုင်းခြင်း၊ ပမာဏကိုပြောင်းလဲခြင်းတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့။
အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာတွေက Diflunisal နဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ပါသလား။
Diflunisal က အစားအသောက် ဒါမှမဟုတ် အရက်သေစာနဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေဖြစ်ပြီး ဆေးဝါးတွေအကျိုးသက်ရောက်မှုပုံစံနဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ချေ ပြောင်းလဲမှုတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မလိုလားအပ်တဲ့ ဓါတ်ပြုမှုတွေမဖြစ်လာအောင်လို့ အစားအသောက်၊ အရက်သေစာတွေနဲ့ ဓါတ်ပြုနိုင်ချေရှိမရှိကို မေးမြန်းတိုင်ပင်ပါ။
ဘယ်လိုကျန်းမာရေးအခြေအနေတွေက Diflunisal နဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိမလဲ။
Diflunisal ဟာ သင့်ရဲ့ နဂိုကျန်းမာရေးအခြေအနေများနဲ့ သက်ရောက်ဓါတ်ပြုမှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို ပိုဆိုးသွားစေတာ ဒါမှမဟုတ် ဆေးသက်ရောက်မှုပုံစံပြောင်းလဲသွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအခြေအနေအကုန်လုံးကို သင့်ရဲ့ဆရာဝန် ဒါမှမဟုတ် ဆေးဝါးကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို အသိပေးဖို့ အရေးကြီပါတယ်။
အရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေမှာ Diflunisal ကို သောက်သုံးရမယ့်အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
နာကျင်ခြင်းဝေဒနာအတွက် သုံးစွဲရန် ဆေးပမာဏ :
ကနဦးဆေးပမာဏ : ၁၀၀၀ မီလီဂရမ် (သောက်ဆေး)။
ဆက်လက်သုံးစွဲရန် ဆေးပမာဏ : တခါသောက်ရင် ၅၀၀ မီလီဂရမ်ပမာဏနဲ့ ၁၂ နာရီခြားတခါ သောက်ရပါမယ်။ တချို့လူနာတွေမှာ ၈ နာရီခြားတခါသောက်ဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။
အများဆုံးသုံးစွဲနိုင်သော ပမာဏ : တနေ့လျှင် ၁၅၀၀ မီလီဂရမ်။
မှတ်ချက်များ :နာကျင်မှုအတိုင်းအတာ၊ဆေးအပေါ် လူနာရဲ့တုံ့ပြန်မှု၊ကိုယ်အလေးချိန် ဒါမှမဟုတ် အသက်အရွယ်ကြီးရင့်မှုတို့အပေါ်မူတည်ပြီး အထက်မှာဖော်ပြခဲ့တာထက် နည်းပါးတဲ့ ဆေးပမာဏကိုလည်း သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။ဥပမာ ကနဦးဆေးပမာဏအဖြစ် ၂၅၀ မီလီဂရမ်သောက်သုံးပြီး နောက်ပိုင်းမှာ တခါသောက်ရင် ၂၅၀ မီလီဂရမ်ပမာဏနဲ့ ၈ နာရီ ဒါမှမဟုတ် ၁၂ နာရီခြားတခါ သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်။
အသုံးပြုခြင်း : အပရိက နာကျင်မှုများနှင့် အတန်ငယ်ပြင်းထန်သော နာကျင်မှုများကို ကုသပေးဖို့ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
တနေ့လျင် ၅၀၀ – ၁၀၀၀ မီလီဂရမ် သောက်သုံးပေးရမှာဖြစ်ပြီး နှစ်ကြိမ်ခွဲသောက်ရပါမယ်။
-လူနာရဲ့ အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ဆေးပမာဏကို လိုတိုးပိုလျှော့လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
-တနေ့ကို ဆေးပမာဏ ၁၅၀၀ မီလီဂရမ်ထက် မပိုရပါဘူး။
အသုံးပြုခြင်း : အရိုးနှင့်အဆစ်အမြစ်ရောင်ရမ်းနာကျင်ခြင်းများ၊ရူမတွိုက်အဆစ်အမြစ်ရောင်ရောဂါများအတွက် အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
ကျောက်ကပ်ဆိုးဆိုးရွားရွား ပျက်စီးနေရင် ဒီဆေးကို အသုံးမပြုသင့်ပါဘူး။ တကယ်လို့ မဖြစ်မနေ အသုံးပြုရမယ်ဆိုရင် ကျောက်ကပ်ရဲ့ လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နိုင်မှုအနေအထားကို အနီးကပ်စောင့်ကြည့်ရပါမယ်။
-အသည်းစစ်ဆေးမှုရလာဒ်မကောင်းသူတွေ ဒါမှမဟုတ် အသည်းပျက်စီးခြင်းရဲ့ ရောဂါလက္ခဏာတစုံတရာ ပြသလာသူတွေအနေနဲ့ ပိုမိုပြင်းထန်တဲ့ အသည်းထိခိုက်မှုကို ခံစားနေရတာ ဖြစ်နေနိုင်တဲ့အတွက် အထူးဂရုပြုစစ်ဆေးရပါမယ်။
-အသည်းရောဂါတစုံတရာ ဖြစ်ပွားလာရင် ဒါမှမဟုတ် eosinophil လို့ခေါ်တဲ့ သွေးဖြူဥတမျိုးများပြားလာရင် ဒါမှမဟုတ် အနီစက်တွေထွက်လာရင် ဆေးသုံးစွဲမှုကို ချက်ချင်းရပ်တန့်ရပါမယ်။
သက်ကြီးရွယ်အိုလူနာတွေမှာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပေါ်နိုင်ချေ နဲ့ ကျောက်ကပ်ထိနိုင်ချေ ပိုများတာကြောင့် ဆေးပမာဏကို လျှော့ပြီးပေးသင့်ပါတယ်။
-ဆေးပြားတပြားလုံးကို မြိုချပါ။ ဝါးစားခြင်း၊ချိုးပစ်ခြင်း မလုပ်ရပါဘူး။
-ကနဦးတုံ့ပြန်မှုအပေါ်မူတည်ပြီး ဆေးပမာဏနဲ့ အကြိမ်ရေကို လူနာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင် လိုတိုးပိုလျှော့ လုပ်နိုင်ပါတယ်။
-အခြားရွေးချယ်နိုင်တဲ့ ဆေးတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် ဒီဆေးရဲ့ ကောင်းကျိုးဆိုးပြစ်တွေ ဘယ်လိုရှိသလဲဆိုတာ ကုသမှုမစတင်မီအချိန်ကတည်းက တွက်ဆချင့်ချိန်ရပါမယ်။
-ထိရောက်မှုရှိမယ့် အနည်းဆုံးဆေးပမာဏကို ဆရာဝန်အနေနဲ့ ရွေးချယ်ညွှန်ကြားရမှာဖြစ်ပြီး ဆေးသောက်ရမယ့်ကာလကိုလည်း နည်းနိုင်သမျှ အနည်းဆုံးဖြစ်အောင် ရွေးချယ်ရပါမယ်။ လူနာတဦးနဲ့တဦး လိုအပ်ချက်ကတော့ မတူညီနိုင်ပါဘူး။
-စတီးရွိုက်မဟုတ်တဲ့ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးတွေကို သုံးစွဲတဲ့အခါ နှလုံးထိခိုက်ခြင်း၊နှလုံးကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်တော့ခြင်း၊လေဖြတ်ခြင်း အစရှိတဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရနိုင်ပါတယ်။ ဒီလို ဆိုးကျိုးတွေဟာ ဆေးသုံးစွဲနေစဉ် ဘယ်အချိန်မှာမဆို ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပြီး ကာလကြာရှည်စွဲသုံးလေ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးဖြစ်ပေါ်နိုင်ချေများလေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ နှလုံးနဲ့ သွေးကြောဆိုင်ရာ ရောဂါရာဇဝင်ရှိခြင်း၊နှလုံးနဲ့ သွေးကြောဆိုင်ရာ ရောဂါတွေ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေရှိနေခြင်း ဒါမှမဟုတ် ဆေးပမာဏများများ သုံးစွဲရခြင်း အစရှိတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကြောင့်လည်း နှလုံးနဲ့ သွေးကြောဆိုင်ရာ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေ ပိုလာနိုင်ပါတယ်။
-နှလုံးနှင့် သွေးကြောဆိုင်ရာ : ဆေးစတင်သောက်တဲ့ အချိန်ကစပြီး သုံးစွဲနေစဉ်ကာလတလျှောက်လုံးမှာ သွေးပေါင်မှန်မှန် ချိန်ပေးရပါမယ်။
-အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ : အစာအိမ်နဲ့ အူလမ်းကြောင်းမှာ သွေးယိုစီးခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ လက္ခဏာတွေကို စောင့်ကြည့်နေရပါမယ်။
-ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာ : ကျောက်ကပ်အခြေအနေကိုလည်း ဂရုတစိုက်စောင့်ကြည့်ရပါမယ်။ အထူးသဖြင့် ကျောက်ကပ်တွင်း သွေးအသွားအလာကောင်းစေဖို့အတွက် ပရိုစတာဂလန်ဒင်းဟော်မုန်းကို အားပြုနေရတဲ့ လူနာတွေမှာ ပိုအရေးကြီးပါတယ်။
-ကာလတာရှည်သုံးစွဲနေရတဲ့ လူနာတွေအားလုံးမှာ သွေးစစ်ဆေးမှုတွေ၊ကျောက်ကပ်နဲ့ အသည်းကောင်းစွာ အလုပ်လုပ်ခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးမှုတွေကို သတ်မှတ်ထားတဲ့ အချိန်ကာလတွေမှာ ပုံမှန်ပြုလုပ်ပေးရပါမယ်။
-အစာအိမ်နှင့် အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာများ၊ဓါတ်မတည့်လက္ခဏာများ (အရေပြားမှာ ပေါ်ပေါက်လာတတ်တဲ့ လက္ခဏာများ အပါအဝင်)၊အသည်းထိခိုက်တဲ့ လက္ခဏာများ ပေါ်ပေါက်လာရင်၊အကြောင်းရင်းတစုံတရာမရှိဘဲ ကိုယ်အလေးချိန်တက်လာရင် ဒါမှမဟုတ် ဖောရောင်နေရင် ဆေးကုသမှုခံယူပါ။
-အသက်ရှုမဝခြင်း၊စကားပီသစွာ မပြောနိုင်တော့ခြင်း၊ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း၊ကိုယ်တခြမ်းကောင်းစွာ မလှုပ်နိုင်တော့ခြင်း အစရှိတဲ့ နှလုံးနဲ့ သွေးကြောဆိုင်ရာလက္ခဏာတွေ ပြလာပြီဆိုရင် အရေးပေါ်ဆေးကုသမှုကို အမြန်ဆုံးခံယူပါ။
-ကိုယ်ဝန်ရှိနေရင်၊ကိုယ်ဝန်ရှိလာနိုင်ရင် သို့မဟုတ် ကလေးနို့တိုက်နေရင် ဆရာဝန်ကို အသိပေးတိုင်ပင်ရပါမယ်။ ကလေးနို့တိုက်နေစဉ် ဒါမှမဟုတ် ကိုယ်ဝန်ရှိနေစဉ်မှာ ဒီဆေးကို မသုံးစွဲသင့်ပါဘူး။
ကလေးငယ်တွေမှာ Diflunisal ကို သောက်သုံးရမယ့်အချိုးအစားက ဘယ်လောက်လဲ။
အသက် ၁၂ နှစ်နှင့် အထက် :
အသက် ၁၂ နှစ်နှင့် အထက် : တနေ့လျင် ၅၀၀ – ၁၀၀၀ မီလီဂရမ် သောက်သုံးပေးရမှာဖြစ်ပြီး နှစ်ကြိမ်ခွဲသောက်ရပါမယ်။
Diflunisal ကို ဘယ်လိုပုံစံမျိုး အချိုးအစားမျိုးတွေနဲ့ရရှိနိုင်မလဲ။
Diflunisal ကို အောက်ဖော်ပြပါ ဆေးဝါးပုံစံများနှင့် အချိုးအစားများဖြင့် ရရှိနိုင်ပါတယ်။
Diflunisal ကို သောက်သုံးဖို့ လွတ်သွားခဲ့ပါက (မေ့ခဲ့ပါက) သတိရတဲ့အချိန်မှာ အမြန်ဆုံးသောက်သုံးပါ။ သို့သော်လည်း နောက်တစ်ကြိမ်သောက်သုံးရမယ့်အချိန်နဲ့ နီးကပ်နေပြီဆိုရင်တော့ လွတ်သွားတဲ့အကြိမ်ကို ကျော်ပြီး ပုံမှန်အချိန်မှာပဲ သောက်လိုက်ပါ။ ဆေးပမာဏကို နှစ်ဆတိုးသောက်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့။